Tv Kunye Nefilimu | January 2022
Ezona Ndlu Zipholileyo
'Isihelegu' seNdawo yokuKhanya kweNdawo yokuKhanya, iNdoda kwiPonti yezigidi ezi-4 zezigidi
Isiqendu seGrand Designs sihlawuliswe 'njengeyona ilusizi kakhulu' emva kwesibini esitshatileyo, uEdward noHazel Mfutshane, bohlulwe emva kokuba iphupha lokukhanya kwelanga laseNyakatho yeDevon liphela kwi- $ 4 yezigidi zamatyala.
Uthotho lwesiBini oluPhezulu lokuPheka koSapho: Dibana nabaKhuphiswano boSapho
Umboniso woKupheka koSapho-umboniso wokutya okhuphisanayo obhiyozela iintsapho ezenza ukutya okuqhelekileyo okungaqhelekanga-ubuyile kuthotho lwesibini kwi-BBC ezimbini kunye ne-Celebrity Masterchef kunye nombhali wencwadi yokupheka u-Angellica Bell, kunye noyena mncinci wase-Bhritane owayengumpheki we-Michelin, uTommy Banks, ebonisa nokugweba uthotho.
I-Grand Designs 'kaEdward: Indlu yokuKhanyisa inokugqitywa ngoSeptemba 2020
U-Edward Short, owavela kwisiqendu esibuhlungu kakhulu se-Grand Designs, unethemba lokugqibezela indlu yokwakha isibane eCroyde, North Devon, ngo-Agasti okanye ngo-Septemba 2020.
Ngaphakathi eHighclere castle, elona Khaya liyiDownton Abbey: Iifoto
I-Highclere castle, ikhaya lokwenyani le-Downton Abbey, likhaya eliyimbali elimangalisayo elisembindini weHampshire. Thatha ukhenketho ngaphakathi ...
Uphi iBridgerton? Iindawo zaseBridgerton zokuFayilisha e-UK
Iindawo zokufota iBridgerton: Ukusuka kwizindlu zedolophu ezibhinqileyo e-wisteria ukuya kumakhaya aphefumlayo eHampshire, iindawo zokufota zibandakanya iindawo ezahlukeneyo e-UK.
Ngaba ukuthengisa ukutshona kwelanga uDavina Potratz uthengise iAdnan's $ 75 yezigidi zeNdlu?
Ukuthengisa i-Sunset Davina: Ngaba iarhente yeqela le-Oppenheim uDavina Potratz ukwazile ukufumana umthengi ophumeleleyo kwindlu yezigidi ezingama-75 zeedola zika-Adnan Sen?
Imiboniso yaseKhaya eyintandokazi yokwenziwa kweKhaya ityhilwe
Ukusuka kumagumbi atshintshayo ukuya kuyilo olukhulu, zininzi izinto ezintle kunye nezoyilo olubonakalayo ekhaya eziye zahombisa izikrini zethu zeTV kule minyaka idlulileyo.
Indawo elangeni: Iintetho, iipropati, ixesha elitsha lothotho, umhla
Indawo eLangeni ibuya kunye nabasasazi uJasmine Harman, uDanni Menzies, uLaura Hamilton, uScarlette Douglas, uJean Johanson, uJonnie Irvin kunye noBen Hillman.
Ingcali yezibalo ityhila isisombululo ku-Ross Geller's Iconic 'PIVOT!' Isofa Indawo yabahlobo
URoss Geller uzama ukuqhuba isofa entsha kwizitepsi kwigumbi lakhe kuhlala kungumboniso wobuhlobo kubahlobo, ixesha lesihlanu. Ngoku, isazi semathematika siye safumanisa ukuba uRoss angayifumana njani isofa kwigumbi ngokwenza izinto ezilula.
Izindlu ezili-11 zoLungiso eziThengiswayo Zilungele iBridgerton -Ipropathi iyathengiswa
Ukubhiyozela impumelelo yedrama entsha yeNetflix, iBridgerton, ezi ndawo zeRegency ngoku zithengiswayo azizukuvela kwindawo kolu thotho lutsha.
Ubomi obutsha bukaSara Beeny Kwilizwe: Isiteshi esitsha se-4 yeTV
Ubomi obutsha bukaSarah Beeny kweli lizwe ulandela uSarah, umyeni uGraham Swift kunye noonyana babo abane njengoko befudukela eSomerset bayokwakha ikhaya elingathathi cala kwikhabhoni.
Ii-Oscars ezibomvu zekhaphethi nguMbala 'oMfihlakeleyo' oKhethekileyo oZeziphi iiFlatters A-Uluhlu
Onke amehlo aya kuba kwikhaphethi ebomvu ye-50,000 sq ft yee-91st Academy Awards ngendleko eqikelelweyo ngaphezulu kwe- $ 24,700. Kodwa umsebenzi omninzi uyaqhubeka xa kufikwa kweyona khaphethi idumileyo yaseHollywood.
I-Stacey Solomon's New Show Decluttering Show: Hlela uBomi bakho ngaphandle
UStacey Solomon uza kunika i-BBC Enye into entsha yokwazisa kunye nokuphuculwa kwenkqubo, Hlela uBomi bakho ngaphandle.
INetflix: Ukulungiselela, iiPropathi kunye neMiboniso yoYilo lwasekhaya ye-2021
Uthotho olutsha lukaMarie Kondo luya kusasaza kwiNetfliz ehlotyeni, kunye namaxesha amatsha oLungelelwaniso noHlelo lwaseKhaya kunye nePhupha lokuTshintsha ikhaya. Kwaye kukho ukuthengisa ngakumbi kwelanga kunye noluhlu olutsha kraca malunga neFlorida yokuthengisa izindlu nomhlaba, Allure Realty.
Indlu kaGeorge Clarke yakudala eKhaya, iNqaku lesi-4: Umhla wokuQalisa, uMbonisi, isiKhokelo seNqaku
Indlu kaGeorge Clarke yeNdlu eNtsha yasekhaya uthotho lwesi-4 lusasazwa rhoqo ngoLwesine ngentsimbi yesibhozo kwiChannel 4. Fumanisa ukuba ivuliwe nini, ngubani oyiphetheyo kwaye kwenzeka ntoni kwisiqendu ngasinye.
Inqaba yaseGwrych, eAbergele ikwiConwy County Borough, eMantla eWales, kwaye yindawo yokubonisa ukuba ndingusaziwayo ... Ndikhuphe apha! uthotho 20.
Ithini Imigaqo Yam Yasekhitshini yase-UK Kwaye I-Channel 4 Yokupheka Iqala Ntoni? -IIMKR
Ukulandela ukuphumelela komboniso e-Australia, uhlelo lwase-UK lweMithetho Yami Yekhitshi ibuyela kwiChannel 4 kunye neejaji ezintsha uRachel Allen noGlynn Purnell.
Ukuthengisa i-Sunset yeNdlu yeNdlu ayisebenzi kwiNtengiso
I-Versace Mansion West, eyaziwa ngokuba yi 'Versace house', yatyelelwa nguChrishell Stause, uMary Fitzgerald kunye noAmanza Smith kwiSelling Sunset kwisizini yesithathu.
Ngaphakathi kwe-ITV2 i-Love Island 2018 Villa-iTyelelo leNdlu yesiQithi seNdawo
Kwisiqendu seLove Island 2018, ii-singletons zihlala kwindlu ethile kwesinye seziqithi zaseSpain iBalearic Islands, iMajorca, eSant Llorenç des Cardassar emi kunxweme olusempuma yesi siqithi. Thatha ukhenketho ngaphakathi kwilali apho kuboniswe khona umboniso we-ITV2.
Yilungelelanise noHlelo lweKhaya, Ixesha elinye kwiNetflix- EYNTK
Uthotho lweNetflix: Lungelelaniswa noHlelo lwaseKhaya ubona uququzelela igurus uClea Shearer noJoanna Teplin banceda uKhloe Kardashian, uEva Longoria kunye noNeil Patrick Harris.
uyihombisa njani iishelufa zeencwadi
iintyatyambo ezibonakala ngathi ziingcungcu
Uyilo lwangaphakathi lodonga izimvo